နီကိုလာတက်စ်လာ၏ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သော တီထွင်မှု ၁၀ ခု | Curiosity Science Magazine
August 6, 2016 · by Thar Htet Aung	· in Physical Science, Technology and Applied Science, Uncategorized.	·
“Ere many generations pass, our machinery will be driven byapower obtainable at any point of the universe. Throughout space there is energy.” — Nikola Tesla, 1892
တက်စ်လာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းစာအုပ်များအပါအ၀င် မီဒီယာများတွင် တီထွင်သူပါရမီရှင်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြခံရသော သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု နှင့် ထိုစဉ်ခေတ်အခါက အမေရိကန်၏ ခရိုနီတစ်ဦးဖြစ်သူ သူဌေးကြီး J.P Morgan ပေးသော အခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် တက်စ်လာသေဆုံးသော ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက် ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အစိုးရသည် တက်စ်လာ၏ တိုက်ခန်း နှင့် စမ်းသပ်ခန်းများသို့ဝင်၍ တက်စ်လာ၏ စာရွက်စာတမ်းများကို ၀င်ရောက်သိမ်းယူခဲ့သည်။ ယခု အချိန်တွင် ၄င်းစာတမ်းများသည် FBI ဌာနဆီရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသော တက်စ်လာ၏ တီထွင်မှုများလည်း အများအပြားကျန်နေသေးသည်။
ယခု သူ့အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ပြောချင်သည်။ သူ့အကြောင်းမှာ ဘယ်နှခါပြောပြော ဘယ်မှာကြားကြားကျွန်ုပ်အတွက်တော့ မရိုးနိုင်သောအကြောင်းအရာများပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်တည်း ဟော်တယ်အခန်းငယ်လေးထဲတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သူ၊ ဂုဏ်ပုဒ် နှင့် ဆုတံဆိပ်များ ပေးအပ်မခံခဲ့ရသော်လည်း ကမ္ဘာဆိုသော ဂြိုလ်ကြီး၏ မျက်နှာပြင်၊ အနာဂတ်နှင့်စွမ်းအင်များကို မည်သူနှင့်မှ မတူအောင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့သူ နီကိုလာတက်စ်လာ(Nikola Tesla) ၏ ထိပ်တန်းတီထွင်မှု ၁၀ ခုကို တင်ပြပါမည်။
၁ ။ Alternating Current — အားလုံး၏ အစ၊ တက်စ်လာ၏ တီထွင်မှုများအစဖြစ်သည်။ ၁၈၉၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သော “1983 World’s Expo in Chicago” တွင် တက်စ်လာသည် အားလုံးအံ့သြသွားစေခဲ့သော အေစီ လျှပ်စစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အက်ဒီဆင်၏ ဒီစီလျှပ်စစ်နှင့်အပြိုင်ဖြစ်လာသည်။ အက်ဒီဆင် နှင့် တက်စ်လာတို့၏ လျှပ်စစ်အား သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသင့်သည့် နည်းလမ်းများအပေါ်အမြင်တွင် မတူညီတော့။ ပြိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီစီသည် လူကို အန္တရယ်မဖြစ်စေသော်လဲ အလွန်ဝေးလံသော နေရာများသို့ လျှပ်စစ်ကို ပို့ဆောင်သည့်အခါ ၀ိုင်ယာကြိုးများ၏ ခုခံအားကြောင့် တဖြည်းဖြည်းချင်း အားကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ အေစီ မှာမူ အန္တရာယ်အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း အားကျဆင်းမှုမရှိပဲ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ဤ ပြိုင်ဆိုင်မှုများလုပ်သည့်အခါတွင် အက်ဒီဆင်သည် တိရိစ္ဆာန်များအား လျှပ်စစ်တိုက်၍ အေစီ ၏ ဆိုးကျိုးကို ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယခု သေဒဏ်ပေးရာတွင် သုံးသော လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံကိုလဲ ထွင်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၈၉၃ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သော Edison-Tesla (GE-Westinghouse)Feud တွင် လျှပ်စစ်အသုံးပြုရ၌ တက်စ်လာ၏ အေစီ ကိုသာ အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။
၂ ။ အလင်းရောင် — တက်စ်လာသည် အလင်းရောင်ကို တီထွင်သူတော့ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကမ္ဘာကြီးကို လင်းလက်စေခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယခုသင့်အိမ်တွင်ထွန်းညှိထားသော Florescent မီးသီးမီးချောင်းများအပါအ၀င် ညအခါ ဆိုင်းဘုတ်များတွင် တွေ့ရသော နီယွန်မီးရောင်စုံချောင်းများကို တီထွင်ပေးခဲ့သည်။
၃ ။ X-rays — လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့် လျှပ်စစ်တို့၏ သဘောသဘာဝများကို ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် အားလုံးအသည်းအသန် လေ့လာနေကြသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် တက်စ်လာသည် ၄င်းတို့အား အရှင်းလင်းဆုံးနားလည်နိုင်ရန် သင်ပြခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့၏ နောက်ဆက်တွဲ တီထွင်မှုအဖြစ် X-ray ကို ကမ္ဘာအား ပေးအပ်ခဲ့သည်။ X-ray ၏ အသုံးဝင်ပုံကို ကျွန်ပ်တို့အားလုံး သိပြီးဖြစ်သည်။
၄ ။ ရေဒီယို — Guglielmo Marconi ဆိုသော တီထွင်သူတစ်ဦးသည် ရေဒီယိုကို တီထွင်သောကြောင့် ၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် နိုဘယ်လ်ဆု ပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် တက်စ်လာသည် ၁၈၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက ရေဒီယိုအား တီထွင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် ၄င်း၏ တီထွင်ထားသော အရာ ၂ မျိုး US 645576 နှင့် US 649621 တို့တွင် ရေဒီယိုကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားကြောင့်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်း ၁၉၄၃ ခုနှစ် တက်စ်လာသေဆုံးပြီးအချိန်ရောက်မှ ရေဒီယိုအားတီထွင်သူမှာ တက်စ်ဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
၅ ။ Remote Control — တက်စ်လာသည် ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် N0.613809 ဟူသော အဝေးထိန်း အရုပ်အရွယ် ရေမော်တော်ယဉ်ငယ်လေးတစ်စီးကို ပြသခဲ့သည်။ ထိုယာဉ်၏ အရှိန်၊ ဒလက်များ၊ နှင့် အခြား အချက်ပြမီးများကိုပါ ထိန်းချုပ်ပြသွားခဲ့သည်။
၆ ။ Electric Motor — မတူညီသော စွှမ်းအင် တစ်မျိုး(ဥပမာ – အပူ၊ ရေ၊ လည်ပတ်မှု) တို့အား လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် လွယ်ကူစွာပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်သော လျှပ်စစ်မော်တာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ယခုအသုံးပြုနေကြသော ရေအားလျှပ်စစ်မှာ တက်စ်လာ တီထွင်မှု တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
၇ ။ Robotics — တက်စ်လာ၏ အဆုံးအစွန်ကျော်လွန်သော တီထွင်မှု အိုင်ဒီယာများသည် Robot ဟုခေါ်သော စက်ရုပ်များ ဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ လူကဲ့သို့ လုပ်ရှားနိုင်သော စက်ရုပ်အား ချပြခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ခေတ်ဦးဖြစ်သော ၁၉၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် တက်စ်လာပြောခဲ့သော စကားများမှာ “နောက်ပိုင်းမှာ လူအတု၊ သတ္တ၀ါအတုတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့မှာလဲ အသိညဏ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတိထားပြီးတော့တော့ ဆက်ပြီး တီထွင်မှုတွေ လုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ အသိညဏ်ရှိတဲ့ကားတွေ၊ အသိညဏ်ရှိတဲ့ လူသားတွေရဲ့ အဖော်တွေ ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်လာမှာပါ။” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
၈ ။ လေဆာ — တက်စ်လာ၏ တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော လေဆာသည် အဆိုးအကောင်း ၂ ခုလုံး ဖြစ်စေသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၉ နှင့် ၁၀ ။ Wireless Communications and Limitless Free Energy — ဤ ၂ ခုသည် တစ်ခုအပေါ်တစ်ခုမှီခိုနေသည်။”စကြာဝဠာကြီးထဲမှာ စွမ်းအင်အကူးပြောင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေပြည့်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကြာဝဠာအတွင်း သင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက် တစ်ဖက်မှ ပေးလွှတ်လိုက်တဲ့ စွမ်းအင်ကို လက်ခံရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။” တစ်ကမ္ဘာလုံးအား အခမဲ့ ၀ိုင်ယာမဲ့ လျှပ်စစ်ပေးမည်။ ထို့အပြင် ဓာတ်ပုံများ၊ အသံများ၊ အပါအ၀င် စာများ စသည်တို့ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ လွတ်လပ်စွာပို့ဆောင်ကြမည်။ ဤစမ်းသပ်မှုကိုလဲ မော်ဒယ်အသေးလေးလုပ်ကာ စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သည်။ ဂျင်နရေတာရှိရာနေရာမှ ၂၅ မိုင်ဝန်းကျင်အတွင်း မြေကြီးပေါ် လျှပ်စစ်မီးသီးစိုက်လိုက်သည် နှင့် ထိုမီးသီးများ မီးလင်းသွားခဲ့သည်။ ထိုနည်းအတိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံး လျှပ်စစ်အခမဲ့(ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်) ပေးရန် တာဝါတိုင်ကြီးတစ်ခုထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် ၄င်းအား ထောက်ပံ့ပေးနေသူ သူဌေးကြီး J.P Morgan သည် ဤစီမံကိန်းမအောင်မြင်ခဲ့လျှင် အရှုံးပေါ်မည်။ အောင်မြင်လျှင်လည်း အခမဲ့ပေးမည်ဆိုသောကြောင့် ရှုံးမည် ဟူ၍တွေးကာ ထောက်ပံ့ပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ တက်စ်လာ၏ ၀ိုင်ယာမဲ့ ဆက်သွယ်မှုများအား ယခုခေတ်တွင် အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်ကမ္ဘာလုံးအား အခမဲ့ လျှပ်စစ်ပေးမည့် အရာအား မည်သူမှ ထပ်မထွင်နိုင်တော့ပေ။
Tags: electronic, facts, history, Physical Science, technology
ရပ်ဆဲလ်ရဲ့ ရေနွေးကရား →
4 responses to “နီကိုလာတက်စ်လာ၏ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သော တီထွင်မှု ၁၀ ခု”
KalaungTone August 6, 2016 at 11:10 pm · · Reply →
၁၈၉၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သော “1983 World’s Expo in Chicago” တွင်
ဘယ်ဟာက အမှန်လဲဗျ။ ၁၈၉၃ လား၊ ၁၉၈၃ လား
Thar Htet Aung August 7, 2016 at 1:41 pm · · Reply →
1893 ဖြစ်ပါတယ်။ Typing မှားသွားတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Han Zar Nyein August 6, 2016 at 5:12 pm · · Reply →
It’s very knowledgeable to read the posts composed and uploaded by curiositymm.com. Thanksalot!
Thar Htet Aung August 7, 2016 at 1:42 pm · · Reply →